Maitiro Ekudzoreredza Vashandisi Kubva paNzvimbo Yavo muWordPress | Martech Zone
China, July 26, 2018 Douglas Karr
Zvakanaka, zvakanyanya kuoma kupfuura zvaunogona kufunga. Heano dzimwe nyaya dzaunomhanyira madziri:
IP addresses inogadziridzwa pane zvinoenderera mberi. Uye yemahara GeoIP dhatabhesi ane akakura machunks e data ariko saka kurongeka kunogona kuva dambudziko hombe.
Mapeji emukati inoda kugadziriswa. Zviri nyore kuendesa mumwe munhu pane peji reimba, asi ko kana vakagara pane peji remukati? Iwe unofanirwa kuwedzera logic logic kuitira kuti vagone kuendeswazve pakushanya kwekutanga muchikamu, uye wozovasiya vega sezvavanotarisa saiti.
Caching zvinodikanwa mazuva ano zvekuti iwe unofanirwa kuve nehurongwa hunobata hunoratidza mushandisi wega wega. Iwe haudi mushanyi mumwe kubva kuFlorida achienda kuFlorida peji uyezve mushanyi wese mushure meizvozvo.
Requests yedata neese mushandisi pane peji rega rega inogona kudzora sevha yako. Iwe unofanirwa kusevha yega yega mushandisi chikamu kuitira kuti iwe haufanire kuramba uchitsvaga kumusoro kumusoro ruzivo rwacho kakawanda.
Vhiki yega yega yekushandisa yakaunza akawanda uye akawanda nyaya saka ini ndakazopedzisira ndarega ndokuita imwe ongororo. Nekutenda, kambani yatove yakaziva uye yagadzirisa nyaya idzi nebasa. GeotargetingWP. GeotargetingWP ine simba API sevhisi kune geotarget zvemukati kana kugadzira geo yakanangwa redirects mukati meWordPress. Vakavaka plugins ina dzinogona kushandiswa zvichienderana nezvinodiwa.
Geotargeting Pro ndiyo inodiwa plugin kune vanobatana nevashambadzi venyika yavo yakatarwa mvumo nekuda kweiri nyore uye zvine simba maficha. Ikozvino neprimiyamu chaiyo kuti ikubatsire kunongedzera Nyika neMaguta akasarudzika zvemukati.
Geo Anodzorera inotumira vashandisi kune akasiyana mawebhusaiti zvichienderana nenzvimbo yavo nematanho mashoma akareruka. Geo Redirects plugin yeWordPress chishandiso chine simba chinokutendera kuti ugadzire nyore kutungamira kubva pane akawanda maitiro.
Geo Mireza iri nyore addon yeiyo Geotargeting Pro plugin iyo inokutendera iwe kuratidza iriko razvino mushandisi nyika mureza kana chero imwe mureza iwe yaunoda nekushandisa yakapfava shortcode seiyi:
[geo-mureza wakaenzana = "nhema" saizi = "100px"]
Geo anovharira plugin yeWordPress inorega iwe ichivharira nyore kuwana kune vashandisi kubva kune dzimwe nzvimbo. Unogona kuvadzivisa kuwana yako saiti yese kana nyore sarudza mapeji api.
Iyo chikuva zvakare inokutendera iwe kuvaka uye kushandisa matunhu kunongedza kuitira kuti iwe haufanire kugadzira isingagumi mitemo inoenderana nenzvimbo dzakawanda. Unogona kuunganidza nyika kana maguta kuitira kuti zvive nyore kunongedza vashandisi. Semuenzaniso, unogona kugadzira nzvimbo inonzi Europe neimwe inonzi America, wobva washandisa iwo mazita mune mapfupi kodhi kana majeti ekuchengetedza nguva. Caching haisi nyaya, chero. Ivo vanoona chaiyo mushandisi IP zvisinei kana ukashandisa Cloudflare, Sucuri, Akamai, Ezoic, Reblaze, Varnish, nezvimwe. Kana iwe uine chimwe chinhu tsika inogona kuwedzerwa nyore.
Ivo API inopa yepamusoro geolocation kunyatso, kudzoka kondinendi, nyika, nyika uye guta data. Sezvo mutengo uchivakirwa pakushandiswa, unogona kungobatanidza zvakananga kune yavo API woishandisa sezvaungade.
Tanga neGeotargeting WordPress
Kuzivisa: Tiri kushandisa yedu yakabatana chinongedzo mune ino post sezvo isu tichida sevhisi zvakanyanya!
Tags: block nzvimbogutanyikageo blockgeo plugingeographic redirectgeographygeotargetnzvimbo redirectmamirirotarisa nzvimbo yezvinyorwaWordpress plugin